कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वका लागि १० जना आकांक्षी « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वका लागि १० जना आकांक्षी
नेपाली कांग्रेसभित्र आगामी १४औं महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वका लागि १० जना आकांक्षी देखिएका छन् । कांग्रेसभित्र हाल कायम रहेको सभापति शेरबहादुर देउवा गुटबाट तीन, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गुटबाट ६ र १३औं महाधिवेशनबाट वैचारिक शक्तिका रूपमा उदाएको कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट दुई नेताले पार्टी नेतृत्वका लागि आकांक्षा देखाएका हुन् । आकांक्षी बढेसँगै कांग्रेसभित्र हाल कायम गुटसमेत फुट्ने देखिएको छ ।
संस्थापन मानिएको समूहबाट आगामी महाधिवेशनका लागि सभापति देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधि र नेता गोपालमान श्रेष्ठले तयारी अघि बढाएका छन् । यसैगरी इतर समूहबाट वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, नेता डा. शेखर कोइराला र अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले तयारी गरिरहेका छन् । यसैगरी कांगेसभित्रको तेस्रो धारका रूपमा रहेको सिटौला समूहबाट नेता सिटौला र युवा नेता गगन थापाले पार्टी नेतृत्वका लागि तयारी गरिरहेका छन् ।
सभापति देउवाले पार्टी नेतृत्वका लागि पुनः एक पटक इच्छा देखाउँदै सोहीअनुसारको तयारीमा नेता कार्यकर्तालाई तयार गरिरहेका छन् भने गत सोमबार भएको एक भर्चुअल कार्यक्रममा समेत आउँदो निर्वाचनमा पार्टीलाई आफूले पहिलो बनाएरै छाड्ने भन्दै नेतृत्वका लागि संकेत गरेका छन् । यसैगरी, सो समूहबाट नेता गोपालमान श्रेष्ठले समेत आफू पनि सभापतिमा उठ्ने तयारी गरिरहेको बताउँदै आइरहेका छन् । उनले बुधबार राजधानीले गरेको प्रश्नमा समेत आफू सभापतिमा उठ्ने बताए ।
उनले सभापति देउवालाई भेटेरै आगामी महाधिवेशनमा आफू नेतृत्वका लागि तयार रहेको भन्दै सघाउन भनिसकेका छन् । उनले महामन्त्री शशांक कोइरालालाई समेत सहयोगका लागि आग्रह गरिसकेका छन् । ‘निधिजीले सभापतिलाई भेटेरै नेतृत्वका लागि सघाउन भनिसक्नुभएको छ, उहाँ अब सभापति देउवाको समर्थन लिने कोसिसमा हुनुहुन्छ । उहाँ अब पछि हट्ने उम्मेदवार होइन,’ निधि निकट एक नेताले भने ।
यस्तै, संस्थापन इतर पक्षबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत पार्टी नेतृत्वका लागि आफू तयार रहेको सन्देश नेता कार्यकर्तालाई दिँदै आइरहेका छन् । सो समूहबाट कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री समेत रहेका नेता प्रकाशमान सिंहले समेत सभापतिमा आफूलाई अघि सारेका छन् । नेता सिंहले आफू देशभरको नेतकार्यकर्ताको चाहनाअनुसार नै पार्टी नेतृत्वका लागि अघि बढेको बताए ।
संस्थापनइतर समूहबाटै हालका महामन्त्री डा. शशांकको समेत पार्टी नेतृत्वका लागि तयारी तीव्र छ । उनले पनि आफू आगामी महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वका लागि अघि बढिसकेको पटक पटक बताइसकेका छन् । यसैगरी नेता डा. शेखर कोइरालाले समेत पार्टी नेतृत्वका लागि आफूलाई अघि बढाइरहेका छन् । उनी सकेसम्म इतर पक्षबाट आफूलाई एक्लो उम्मेदवार बनाउन प्रयासरत छन् ।
प्रकाशित मिति : आश्विन ८, २०७७ बिहीबार ८ : ३५ बजे